Tetikasa fanamafisana an'i Togaf
Tari-dalana iray manontolo momba ny fanamafisana an'i Togaf
Inona ny TOGAF?
TOGAF dia miorina amin'ny Framework Open Open Architecture Framework. Izany dia rafitra arakaraky ny rafitr'antam-barotra izay manome fomba iray hiatrehana ny famolavolana, ny famolavolana, ny fampiharana ary ny fitantanana ny tranokala momba ny teknolojia momba ny teknolojia.
Iza no manome ny fanamarinana?
Izany dia miankina amin'ny rafitra teknikan'ny teknikan'ny teknikan'ny teknikan'ny teknikam-piarovana Amerikana Amerikana (TAFIM) ary novokarin'ny The Open Group. Ny vondrona Open dia mpivarotra sy teknolojia tsy dia tia fironana britanika miaraka amin'ny fikambanan'olona maherin'ny dimanjato ary ny vondron'orinasa voalohany amin'ny fanesorana ny fanadinana.
Inona ny teboka nataon'i TOGAF?
Ny teboka fototra amin'ny TOGAF voamarina ny mpiasa dia ny hanatsara ny vokatra ankapobeny amin'ny orinasa iray amin'ny fanarahamaso ny fomba amam-panao tsy manara-dalàna hiatrehana drafitra. Amin'ny ankapobeny, ny dinganina dia natao ho an'ny mpifaninana mitady ho lasa Enterprise Architect. A TOGAF fanamarinana dia fametrahana tahirin-kevitra tsy hay vakiana
● Ny fiantohana ireo mpiara-miasa izay takian'ny fitsipika manan-danja amin'ny rafitra fanoratana
● Noforonina ny fahaiza-manao ary azo ampifandraisina amin'ny rafitra fanorenana ny orinasa.
Aiza no misy ao amin'ny fikambanana TOGAF ampiharina?
Hatramin'ny TOGAF dia mametraka fepetra mitera-pahavoazana ho an'ny drafitra, dia mipoitra matetika ao amin'ny sehatra 4 ao anatin'ny sehatry ny orinasa iray izy, mba ho sehatry ny Business, Application, Data and Technology.
Business Architecture - Izany no zavatra manasongadina ny fizotry ny raharaham-barotra, ny fitantanana, ny fikambanana ary ny fomba fiasa goavana amin'ny fikambanana
Architecture Application - Izay manome ny sarin'ny tsirairay amin'ny adiresy samihafa izay alefa, ny fifandraisana eo amin'ny rafitra fampiharana sy ny fifandraisana ara-pirahalahiana lehibe
Data Architecture - Izany dia maneho ny rafitry ny loharanon-kevitra ara-drariny sy ara-batana ary ny fitantanany fitantanana.
Technical Architecture - Ny fitaovana, programa ary ny rafitra momba ny tambajotra ilaina amin'ny fampiharana fitsipika
Iza no mahafeno fepetra ho an'ny TOGAF Certification
Tsy misy fepetra fanatanjahan-tena momba ny fananana mari-pankasitrahana TOGAF 9.1. Na izany na tsy izany, ny mpangataka iray dia mila manazava ny fanadinana avy amin'ny fikambanana manana fahazoan-dàlana hamolavola mazava ny Enterprise Architect.
Firy ny isan'ireo fanadinana dia tokony hesorina?
Ny mpifaninana mialona ny TOGAF 9.1 dia takiana hanazava ny fanadinana roa, ny Level 1 ho an'ny TOGAF Foundation ary ny CCNUMX Level ho an'ny TOGAF 2. Ny fikolokoloana ny fanantenany hifantoka amin'izy ireo dia tena hamporisika tokoa ny hisafidy iray indray avy eo. Na izany na tsy izany, ny fanomanana fototra dia nanasongadina ny fianaran'izy ireo mba ahafahan'ny mpifaninana misaintsaina, ary manazava roa ireo Dingana ireo amin'ny iray. Ny fe-potoana fanomanana miaraka amin'ny fametrahana dia fitsipika mandritra ny 9.1 andro ary ny fandinihan-tena dia herinandro 4
Inona avy ireo sakana takiana amin'ny fanesorana ny fanadinana?
Ny fisaraham-peo marina dia ny -
1. Ny Level One or Foundation level - Ny teboka takiana takiana dia 55% izay 22 avy amin'ny 40 tena faran'izay ratsy indrindra. Ireo no fanontaniana isan-karazany amin'ny fanontanian'izy ireo amin'ny fangatahana isan-karazany mampita solonanarana.
2. Fepetra roa na marim-pototra - Ny teboka takiana takiana dia 60% izay 24 avy amin'ny 40 tena faran'izay ratsy indrindra. Ireo dia fanadihadiana samihafa samihafa amin'ny fanadihadiana isam-bolana tsirairay.
3. Iray sy roa mifanaraka TOGAF 9.1 - Ny fizarana dia ahitana fizarana roa. Fizarana iray dia mitovy amin'ny tahan'ny Level One voatondro etsy ambony ary ny fizarana roa dia mitovy amin'ny Peta-teboka roa voalaza etsy ambony, na izany aza raha toa ka misy baomba mandatsa-danja iray indray ny fandinihana dia tokony haka indray io sehatra io indray. Ny mpandraharaha iray nahazo diplaoma momba ny fanofanana ihany no afaka mamela ny mpanafika hanazava ny roa teboka amin'ny iray.
Ny roa teboka dia tokony havaozina noho ny fahafahana nomena ny Togaf 9.1 certificaiton.
Ny lavaka eo anelanelan'ny roa tonta - Tsy maintsy misy lavaka iray volana iray eo anelanelan'ny fikorotanan-tsaina. Ohatra, raha misy mpangataka tonga haingana amin'ny fanadinam-po amin'ny 25th June, 2017, ny fe-potoana mandraka hatramin'ny 27 ny volana, 2017 dia tokony hifikitra amin'ny. Izay fanatanjahan-tena rehetra alohan'ny tsy hijerena izany.
Aiza no misy ny fanadinana?
Ny fanadinana dia mitranga ao amin'ny Pearson VUE mifantoka any amin'ny firenena ary boky fanadihadiana misokatra, izay ahafahan'ny mpikaroka misafidy "tabilao" eo anelanelan'ny fanadinana ao amin'ny efijery PC mba hampiasana azy amin'ny alàlan'ny boky ary hizara amin'ny fitaovana. Ny fomba faharoa dia ny manome fanadihadiana an-tserasera. Ny fampisehoana ankapobeny dia hamporisika ny fanadinana an-tserasera, ary tsy maintsy hanomana anao amin'ny faran'ny fitsapam-pahaizana amin'ny herintaona miaraka amin'ny fanodikodinam-pahaizana hafa ho toy ny singa amin'ny rafi-pampianarany.
Inona avy ireo tanjona manan-danja manan-danja amin'ny TOGAF mariam-pitsipika
Koa satria ny TOGAF Sertification Course dia nanjary nanatsara ny fahaiza-manaon'ny orinasa fanorenana, ny rafitra momba ny tohotra dia mandrakotra tanteraka:
Fomba fampivoarana ny Architecture amin'ny sehatra samihafa
Continuum sy fitaovana
Architecting Partitioning, Fitantanam-pitondrana, Fitsipika sy ny sisa.
Ao anatin'ilay fianarana, ny mpifaninana iray dia:
Mialà amin'ny fotoam-pialan-tsasatra mialoha sy amin'ny fampiendrehana teknika momba ny fifindra-monina
Fantaro ny Framework Content Contenter, Metamodel miaraka amin'ny Governance.
Ny fampiharana ny rafitra fanampiana ara-tsakafo sy ny fahatakarana ny toe-draharaha ara-barotra,
Mahatakatra ny ADM, ny fitantanana ilaina ary ny fanitsiana ny ADM
Ahitsio ny matematika matotra sy ny fahaiza-manao momba ny fandraharahana ara-barotra
Inona no vidin'ny fiomanana amin'ny fanamarinana TOGAF 9.1?
Ny fijerena an-dàlam-pandinihana ho an'ny roa tonta - Ny Fondation sy Certified miaraka dia hiasa manodidina ny INR 75,000. Ankoatra ny vidiny dia zava-dehibe ny fanamarinana ny fototra fanomanana sy ny rafitra alohan'ny famaranana.
Inona no mety ho fanantenana amin'ny ho avy taorian'ny fanombanana ny mari-pankasitrahana TOGAF 9.1?
Satria ny mpangataka dia hanangana fahatakarana lalina momba ny haavon'ny firenentsika eo amin'ny sehatry ny orinasa, dia ny ho avy:
Namboarina ho mpandraharaha ara-barotra ho an'ny MNCs, ary marika manerana izao tontolo izao. Ankehitriny, tsy misy fikambanana, misokatra na tsy miankina afaka miasa raha tsy misy rafitra fandraharaham-barotra matanjaka napetraka
Miasa toy ny manam-pahaizana manamboatra fanonerana be dia be amin'ny fanavahana, famolavolana ary fametahana rafi-panorona ao anatin'ny orinasa iray
TOGAF fanamarinana 9.1 dia fepetra manerantany ho an'ny fahafahana mampita ny ampahany sy ny adidy amin'ny fanavahana, fanombanana ary fametrahana ny rafitra mahomby ho an'ny orinasa iray. Ankehitriny, ny fikambanana rehetra, mandeha amin'ny fandrosoana sy ny fandrosoana, dia mila mpanamboatra orinasa manana fahafahana hahatakatra, hamotehana ary aorian'izay ny valiny marina ho an'ny fanatontosana asa.
Antony 10 mba hahazoana ny TOGAF Training & Certification